Maalmahan, filimada ama ay muujinayso TV barta internet-ka Waxaa sii kordhaya arkay kordhin .MKV, gaar ahaan ilo-qeexidda sare (1080p). Laakiin jirka guri keeni karaan dhibaato marka arkaysid dib. Waxaa laga yaabaa in aad processor jir waa wax aan macquul aheyn in ay daawadaan sida 1080p HD filimada / videos. Ama aad qalab la qaadi karo sida HTC, Samsung Galaxy, iwm ayaa meel si ay u kaydiso ku koobnayn. Caadi ahaan, waxaad isku dayi doonaa inaan riixo barnaamijyada qaarkood emails ama sawiro sida 7-Zip, Xarchiver, WinRAR, WinZip iwm Si kastaba ha ahaatee, qaab file MKV horeba waa heer sare Tifaftirayaasha oo aan ka faa'iideysan doona riixo dheeraad ah. Maxaa la sameeyaa?
Dhab ahaantii, waxaad u baahan tahay oo dhan tan iminka iyo dareen compressor- MKV Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxay kaa caawinaysaa in la yareeyo xajmiga video si weyn oo si deg deg ah ay la qabsado encoder ah, heerka yara, xal, heerka jir, iwm iyo takhalusaya qayb ka mid ah aan la rabin. Oo raac tallaabo-tallaabo oo cadaadin files MKV aad la dhibaatana ma leh.
Hawadda MKV Best for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Si fudud cadaadisaa MKV video aan khasaaro tayada wax.
Beddel goobaha video aad baahida loo qabo.
Wuxuu bixiyaa qaababka tafatirka classic in la shakhsiyeeyo aad videos.
Xawaaraha diinta Superior badan converters kale oo ku saabsan suuqa.
1. Ku dar files MKV in hawadda MKV this
Jiid aad video ee icon ka desktop ama folder barnaamijka. Ama guji "Add Files" icon in ay helaan faylka caga aad ka disk adag ama U disk (Fiiro gaar ah: diinta Dufcaddii taageeray, waxaad ku shuban kartaa laba files MKV, si loo yareeyo riixo iyo waqtiga badbaadin).
2. Customize dejinta loogu soo saarka
Riix qalabka-sida doorasho hoose ee suuqa kala aasaasiga ah in la furo suuqa kala dejinta. Halkan, aad qabsato karaa koobin ee video iyo maqal ah labadaba.
Encoder : Riix arrow si ay u helaan daadiyaa fursadaha, ka dibna ka dooro mid, ama uun ha sida defaulted. Resolution: 320 * 240.480 * 272.480 * 368.640 * 480, iyo in ka badan. Haddii aad rabto in aad ka ciyaaro iPod, iPhone 4 / iPhone 4s, PSP (oo ay ku jiraan PSP3), 480 * 272 shuqulkii weynaa. Rate jire ah: Waxaad dooran kartaa ka qiimayaal kala duwan si ay u yareeyaan ama dadajiso xawaaraha ciyaareed. Guud ahaan, qiimaha sarreeya 20 faraq yar. Rate Inyar: Qiimaha kala duwan: 256kbps in 2000kbps, ee ka dooro mid sax ah sida baahidaada.
Si loo badbaadiyo waqtiga aad, barnaamijka ayaa sidoo kale waxay bixisaa saddex hab oo tayo leh si ay u doortaan. Xaaladaha intooda badan, waxaad dooran kartaa oo keliya "Size yaryar" ku cadaadisaa files MKV iyo wax kasta ha taam smart.
3. riixo Start MKV
Marka dhan goobaha iyo wax ka bedelida ay dhammaystirmaan, button badalo guji si aad u bilowdo riixo. Barnaamijkan waxa aad u hufan ee diinta iyo bar horumarka muujin doontaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Video tutorial: Sida loo cadaadi MKV Video Files
Midowdo MKV: Sida loo midowdo MKV Video Files aan Gap
8 Talooyin Videos koombiyuutarka Facebook
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa MKV Faylal ay la Quality sameecadda ah ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)